Dorashada Soomaaliya & walaaca "Beesha Caalamka" | KEYDMEDIA ENGLISH
Dorashada Soomaaliya & walaaca “Beesha Caalamka”
War-saxaafadeed wadajir ah oo ka soo baxay wakiillada Beesha Caalamka ee fadhigoodu yahay xerada Xalane, ayaa lagu muujiyay walaac xooggan oo ku aaddan hirgalinta hannaanka doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Beesha Caalamka ayaa mar kale walaac xooggan ka muujisay dib u dhaca doorashooyinka dadban, gaar ahaa kuraasta Golaha Shacabka, waxayna hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo Guddiyada Hirgelinta Doorashada ee Heer Dowlad Goboleed ku booriyeen in si deg deg ah loo dhameystiro doorashada.
“Saaxiibbada Caalamiga ahi waxa ay weli si weyn uga walaacsan yihiin jadwalka doorasho ee uu dib-u-dhaca weyn ku yimid waxa ayna ku boorrinayaan hoggaanka Soomaalida, ee dhammaan heerarka dowladda, in ay si deg deg ah u bilaabaan una dhammeystiraan geeddi-socodka doorashada ee kuraasta Golaha Shacabka”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay UNSOM.
Wakiillada Caalamku waxa ay xuseen in doorashooyinku aysan u xirneeyn dhaqaalo la’aan, isla-markaana, durba gacanta lagu dhigay dhaqaale ku filan, oo ay qeyb ahaan bixineyso beesha caalamka halka lacag xooganna ay ka soo xarootay doorashooyinkii Aqalka sare.
“Waxa aan sii wadeynaa in aan ku baaqno doorashooyin lagu kalsoonaan karo, loo dhan yahay, wakhtigoodana ku qabsooma, kuwaas oo joogteya hufnaanta geeddi-socodka doorashada”. Ayaa sidoo kale lagu yiri.
Dhanka kale, waxay soo dhaweeyeen dhammeystirka doorashada Aqalka Sare ee daba socotay kulanki Golaha Wadatashiga Qaran ee 11 ka Nofeembar iyo ballan qaadka hoggaamiyeyaasha.
Saaxiibada Caalamku waxa ay ku celceliyeen in dhammeystirka doorashooyinka Golaha Shacabka aysan dhaafin ugu dambeyn dhammaadka Diseembar 2021, isla-markaana la hubiyo qoondada haweenka ee ugu yaraan boqolkiba 30-ka ah.
Waxa ay xuseen in dib-u-dhaca doorashada oo sii daba dheeraada ay sababi doonto in, in badan oo wakhti iyo dhaqaale ah laga weecin doono hortebinnada muhiimka ah ee qaranka, sida ka jawaabista xaaladaha beni’aadanimo ee abaaraha, dowlad-dhiska iyo xaqiijinta amniga.
Bayaanka UNSOM, ayaa ku soo aadaya xilli, uu maanta mar kale, dib u dhacay jadwalka doorashada Golaha shacabka , kaas oo Guddiga doorashooyinka heer federal, uu dhawaan sheegay in gobollada dalka laga daah-furi doono 16-ka bisha oo maanta ku beegan.